Ekunze makomba emoto kupa kudziya kune yako patio kana gadheni | Bezzia
Makomba emoto ekunze kuti ape kudziya kune yako patio kana gadheni
Maria vazquez | 13/05/2022 18:00 | Zvishongedzo zvekumba
Wakafunga here pakupera kwezhizha rapfuura kuti gore rino uchagadzirisa nzvimbo dzekunze? Tanga kubatanidza zvinhu izvo zvisingango wedzera hunhu kwavari asiwo zvinoita kuti zvive zvakanyanya kushanda. Zvinhu zvakadai makomba emoto ekunze izvo zvatinofunga nhasi.
Iwo mabrazier ndizvo chaizvo zvauri kutsvaga kuti ukwanise kuwedzera nguva yaunotora mukana webindu rako kana patio. Ivo vari sculptural masikati uye vanoita kuti nzvimbo dzekunze dzitaridzike kudziya pahusiku hunotonhorera Zvezhizha. Chinja saizi yayo uye chimiro kune yako yekunze nzvimbo uye ita mutsauko!
1 Zvikonzero zvekubatanidza brazier munzvimbo yako yekunze
2 Mhando dze brazier
3 Metallic ine zvimiro zvakatenderedzwa
4 Dombo bioethanol braziers
Zvikonzero zvekubatanidza brazier munzvimbo yako yekunze
Pane chimwe chinhu chiri kushaikwa munzvimbo yako yekunze? Dzimwe nguva tine manzwiro iwayo asi isu hatinyatso kujeka pamusoro peicho chatinofanira kubatanidza kuitira kuti chinyangarika. Gomba remoto rinogona kunge riri iro rauri kutsvaga- Kune, hongu, zvikonzero zvakawanda zvekuda kubatanidza imwe mune yako yekunze nzvimbo dhizaini:
Inobvumira kutora mukana wenzvimbo dzekunze zvakare mu husiku hunotonhora zvikuru hwezhizha.
Vhenekesa patio uye magadheni pakati pehusiku, ichipa chiedza chepedyo uye chinodziya.
Vanova chinhu chakatenderedza unganidza mhuri.
Vanowedzera unhu uye kudziya kune dhizaini yekunze
Avo vanopisa huni kana marasha Vanogona kushandiswa segrill. Muchokwadi, akawanda magadzirirwo anosanganisira imwe.
Mhando dze brazier
Tinogona kuisa mabrazier zvichienderana nechinhu chaanogadzirwa kana chimiro chaanotora. Isu takasarudza, zvakadaro, kubheja pane yakasanganiswa tichiratidzira mhando dzinonyanya kufarirwa dzemabrazier, ese ayo anozove nyore kwauri kuti uwane.
Metallic ine zvimiro zvakatenderedzwa
Masikati vanoita sekunge chivezwa mubindu uye pakuvira kwezuva vanova brazier, vachivaita chidimbu chakakwana chekushongedza terasi yako, patio kana gadheni. Makomba emoto akavharidzirwa neupfu anoyevedza, kunyangwe ari iwo madhizaini ane oxidized anonyatsokodzera kutenderedza misoro uye kuwedzera avant-garde kubata kune iyo nzvimbo yekunze.
Metal braziers ane maumbirwo akatenderedzwa anonyanya kukodzera kushongedza nzvimbo diki dzekunze sezvo iwe uchizowana madhizaini kubva 51 masendimita mudhayamita izvo zvinozoita kuti zvive nyore kwauri kuigadzirisa kune izvi. Iwe uchada, hungu, imwe nzvimbo diki yekuchengetera huni dzauchapisa madziri.
Imwe bhenefiti yekufunga nezvesimbi braziers ndeyekuti ivo vari kuwanikwa nehupfumi; iwe unogona kuzviwana kubva ku150 €. Mukuwedzera, ivo vakareruka kupfuura dzimwe nzira, izvo zvinokubvumira kuti uchinje nzvimbo paunenge uchida kuishandisa neimwe nzira.
Dombo bioethanol braziers
Iyo yemazuva ano silhouette uye mitsetse yakachena yematombo emoto emoto ichawedzera chimiro kune chero nzvimbo yekunze, yakakura kana diki. Kushandiswa kwe bioethanol sehuni, ichaita kuti kuishandisa kuve nyore uye kwakachena.
Iwe unogona kuwana rudzi urwu rwebraziers ne zvimiro zvedenderedzwa kana kuti rectangular. Iwo ekutanga anonyanya kunakidza munzvimbo dzekunze nemhepo yakasununguka uye yakajairika. Iwo rectangular akafukidzwa nedombo, panguva iyi, anopa humwe hunyoro hunoyevedza.
Pasinei nemagadzirirwo avo, aya makomba emoto ekunze vazere namabwe kushandisa zvose saizi uye ruvara rweizvi kutamba nemanyorerwo. Aya matombo anotarirwa kuvanza moto uyo, kunze kwebiotenaol, inogona kushanda nemamwe mafuta. Mazhinji emabraziers ane bhuku rekutanga, asi zvinokwanisika kuvawana nemagetsi ekutanga. Pamutengo wei? Imwe, hongu, yakanyanya kusarudzika.
Yakagadzirwa kunze nekongiri kana dombo, aya mabrazier anorema kupfuura mabrazier esimbi. Iwo makuru akagadzirwa kuti ave ne nzvimbo yakatarwa mubindu, saka iwe uchafanirwa kunyatsofunga nezvekuti ungavabatanidza sei mukugadzira.
Mamwe mabhenji anoenderera mberi, mamwe masofa egadheni kana mamwe macheya ekutenderedza kunze brazier uye kugadzirisa yako yekunze nzvimbo. Hauzodi zvakawanda kuti unakirwe nehusiku hwechirimo. Zorora muchiedza chemwedzi kana kupedza nguva nemhuri uye neshamwari husiku hwezhizha hwakapoteredza moto nemashiripiti ake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zvishongedzo zvekumba » Makomba emoto ekunze kuti ape kudziya kune yako patio kana gadheni
Greenwashing, "girini" yekushambadzira tsika
Mafambiro makuru mukushongedza kwemuchato 2022